WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းဗီဒီယို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Make လုပ်နည်း WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းဗီဒီယိုနှင့်ဝေမျှမယ်လမ်းညွှန်
Make လုပ်နည်း WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းဗီဒီယိုနှင့်ဝေမျှမယ်လမ်းညွှန် APK ကို
ငါတို့ရှိသမျှသည်အခွင့်အရေးသို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်များ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံနှင့်တကွကြွလာတော်မူသောဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေထိုင်နေကြရသည်။ ထို့အပြင်, သင်သည်ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတာသိကြပါသလဲ? ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများကျယ်ပြန့်သည်။ အဘယ်သူမျှမဒီ application များကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးနှင့်ချစ်လှစွာသောသူတွေနဲ့အတူသူတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာနေပါစေချိတ်ဆက်နေဖို့အသုံးပြုငြင်းပယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်, သင်သည်ဤသို့ပွုနှင့်ပိုပြီးပေးနိုင်ပါတယ်ရာတစျခုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောလျှောက်လွှာ, Whatsapp ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ blog ငါတို့သည်အချို့သောကောင်းသော WhatsApp status ကိုဗီဒီယိုကချမှတ်ခြင်းနှင့်ခွဲဝေမှုမျှဝေနေကြသည်။
Whatsapp ကို Facebook ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နာမည်ကြီးမိုဘိုင်း application ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မိုဘိုင်း application ကိုအသုံးပြုသူများကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, အသံမက်ဆေ့ခ်ျများ, အသုံးပြုသူတည်နေရာ, စာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ပုံများနှင့်အများကြီးပိုပြီးမျှဝေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျဤလျှောက်လွှာကိုသုံးပါလျှင်လည်းထိုငျသညျဤလျှောက်လွှာထဲကအများဆုံးရနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့ရုံဖန်တီးမှုနှင့်ဆန်းသစ်ထုံးစံ၌တစ်ဦး Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုကလုပ်ပေမယ့်မမျှဝေနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာစူးစမ်း။
တစ်ဦး Whatsapp အခြေအနေကဘာလဲ?
သငျသညျအဘယျသို့တစ်ဦးမသိလျှင် Whatsapp status ကို ပြီးနောက်သင် Facebook ကဇာတ်လမ်းများသို့မဟုတ် Instagram ကိုပုံပြင်များမှအတန်ငယ်အလားတူဖြစ်ဖို့ကစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Whatsapp status ကိုအသုံးပြုသူများက content ထဲကိုသွင်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်, 24 နာရီကြာတဲ့ကာလပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားရာ။
အသုံးပြုသူများကပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် status ကို upload လုပ်မရခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းအသုံးပြုသူများကိုအခြားအ Whatsapp သုံးစွဲသူအခြေအနေကိုထုတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုနိုင်သည့်တိကျတဲ့ပြ status bar, ရှိပါသည်။
အဘယ်သူသည်သင့်ရဲ့ Whatsapp အဆင့်အတန်းကိုကြည့်ပါနိုင်သလား?
သငျသညျ default settings ကိုအတူ Whatsapp မိုဘိုင်း application ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်သင့်အဆက်အသွယ်လူများအပေါင်းတို့သည်သင်၏ Whatsapp status ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအရှိသင့်နံပါတ်ကိုသူတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီသည်နှင့်သင်လည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်ရှိပါကထိုလူတစ်ဦးကသင့် Whatsapp status ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။
သို့သော်ပိုကောင်းလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကြောင့်ပိုပြီးထိန်းချုပ်သူတို့ရဲ့အနေအထားကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိသူအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဆိုပါကုမ္ပဏီဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ privacy ကိုအင်္ဂါရပ်ကိုထုတ်လှိမ့်ခဲ့သည်။ ဒီ feature သင်တို့ရှိသမျှတွေ့မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့် status ကိုမမြင်နိုင်တော်မူသောပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုကိုရဖို့ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သငျသညျအခြေအနေကို tab ကိုသွားလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, ထို့နောက်သင်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာသုံးစက်မြင်လိမ့်မည်။ သငျသညျထိုအစက်ပေါ် click လုပ်ပြီးတာနဲ့သင်က 'status ကို privacy ကို' '၏' option ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ထို option ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ status ကိုကြည့်ဖို့ရရှိသွားတဲ့သူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ status ကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အဆက်အသွယ်များအားလုံးဆန္ဒရှိလျှင်သင်က 'My အဆက်အသွယ်' 'option ကိုရွေးနိုင်သည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အဆက်အသွယ်သင့်ရဲ့ status ကိုထိုသူအချို့တို့သည်မျှော်လင့်ထားမြင်ချင်လျှင်သင်သည် ' မှလွဲ. အကြှနျုပျ၏အဆက်အသွယ်' '၏' option ကိုရွေးနိုင်သည်။ '' နှင့်အတူသာလျှင်ရှယ်ယာ '' ၏နောက်ဆုံး option ကိုသင်တစ်ခုတည်းကိုသာအတူ status ကိုမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိသူအချို့အဆက်အသွယ်ကို select ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ status ကိုမြင်ဘူးသောလူများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအခြားလူများသင်သည်သူတို့၏အဆင့်အတန်းမြင်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြကုန်အံ့ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးလျှင်သင်ဖတ်ပြေစာများကို turn off နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Whatsapp အခြေအနေဗီဒီယို Make မှဘယ်လိုနေသလဲ?
တ Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုက upload တင်ပေးရန်လိုကျနာနိုငျသောခြေလှမ်းများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ထိုခြေလှမ်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်။
သင့်ရဲ့ Whatsapp status ကိုအောင်သင်ပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခြေအနေကို tab ကိုသွားပါသင့်တယ်
ထို့နောက်သင်ညာဘက်အောက်ထောင့်ထဲမှာအသီးသီးတစ်ဦးခဲတံနှင့်ကင်မရာ၏ပုံရိပ်များနှင့်အတူ icon နှစ်ခုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်
သင်သည်သင်၏ status ကို upload အဲဒီ icon များပေါ်တွင်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး Whatsapp ကိုဗီဒီယို status ကိုတင်ခြင်းသင်တစ်ဦးကကင်မရာ၏ပုံရိပ်နှင့်အတူ icon ကို click ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်
အဲဒီနော, သင်ကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပုံတစ်ပုံကို upload တင်ဖို့အတွက်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်အလယ်၌ထို option ကိုသုံးနိုင်သည်
သင်၏ video မှတျတမျးတငျထားပြီးတာနဲ့ထို့နောက်သင်သည်လည်း, အီမိုဂျီထည့်သွင်းဖို့ညာဘက်ထိပ်ထောင့်မှာပေါ် options တွေကိုအသုံးပြုနိုင်စာသားများ, ဒါမှမဟုတ်စာသားရဲ့အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်
သင်တို့သည်လည်းအောက်ခြေမှ '' စာတန်းထည့်ရန် 'ဘားပစ္စုပ္ပန်ကို အသုံးပြု. စာတန်းထည့်နိုင်သည်
Whatsapp အခြေအနေဗီဒီယိုများ Developing များအတွက်ထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများ
ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ခြေလှမ်းများအရည်အသွေးကောင်း Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုက upload တင်ရန်သင့်အားအသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအဆငျ့ထချင်နဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကအခြားအဆင့်သင့်ရဲ့ Whatsapp status ကိုအပ်လုဒ်တင်ဂိမ်းကိုယူလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဖွင့်လက်ျာအကြံပေးချက်များရှိသည်။ တို့နှင့်ကြီးသော Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုများဖွံ့ဖြိုးဆဲဘို့သူတို့အားအကြံပေးချက်များအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်။
Cool Audio ထဲမှာထည့်သွင်းခြင်း
မကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကလစ်များနှင့်တိုတောင်းသောဗီဒီယိုများအသံဖိုင်များထည့်သွင်းလူများတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုဗီဒီယိုများအတွက် Audio Clip အချို့အတော်လေးရှက်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ application ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤသူတစျခုလုံးကိုပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့မူရင်းဗီဒီယို၏အသံအသံပိတ်မှခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်သည်လည်းအရည်အသွေးကောင်းအသံပုဒ်နှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤအသံပုဒ်၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်တဲ့ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကောက်သင့်တယ်။ ဤသည်သင်တို့အပေါင်း၌သင်၏ video status အထဲတွင်ညာဘက် Whatsapp သေံတင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ကို Reverse ဗီဒီယိုများနှင့်အတူဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သောဘေးထွက် Exploring
သင်သည်သင်၏ Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုများရုံကွဲပြားခြားနားသောမဖွစျဖို့ဒါပေမယ့်လည်းအနည်းငယ်ဇာတ်ဆောင်ဖြစ်လိုပါသလား သောအမှုဖြစ်ပါသည်လျှင်သင်အလွယ်တကူပြောင်းပြန်ကိုဗီဒီယို Whatsapp status အဘို့အရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး Whatsapp status ကို upload လုပ်ရန်သင့်အားလျှောက်လွှာကိုတခြားပြောင်းပြန်ဗီဒီယိုအား၏အကူအညီကိုယူမှရပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုကို reverse ။ အများဆုံးပလီကေးရှင်းကိုသင်အမှန်တကယ်သင်၏ video upload တင်ပြီးတော့သူကနောက်ပြန်လှည့်နိုင်ပါ။ ဒါဟာတကယ်လွယ်ကူနှင့်သင်အေးမြ Whatsapp status ကိုဗီဒီယိုများရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Cinemagraphs GIF ကိုသငျသညျဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအတူတကွပေါင်းစည်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ကဆိုလိုတယ်အတိအကျဘာကိုသိမထားဘူးဆိုရင်ပြီးတော့သင်ကမှာအတော်လေးသိမ်မွေ့ရွေ့လျားနေသောဒြပ်စင်ရှိသည်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့်မကြာသေးမီက applications များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ဒါဟာစတင်များတွင်အနည်းငယ်လှည်ထင်ပေမယ့်မကြာမီပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့။ သင်သည်သင်၏ cinemagraph အတူပြုပြီးတာနဲ့ပြီးတော့သင်ကကယ်တင်နှင့်သင့်အနေအထားကိုအဖြစ် upload တင်လို့ရပါတယ်။
ဤရွေ့ကားသင်သည်သင်၏အုပ်စုတွင်လူတိုင်း၏ငြူစူခြင်းဖြစ်လတံ့သောအံ့သြဖွယ် Whatsapp status အရနိုငျသောနည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်။ ရှေ့ဆက် သွား. , ယခုဤအကြံပြုချက်များအချို့ကြိုးစားကြ!
အခြားအ WhatsApp application ကို
WhatsApp ကိုစီးပွားရေး APK ကို - ယခု Download လုပ်
နယူး GBWhatsapp ...
WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းဗီဒီယို Make လုပ်နည်း Whatsapp အခြေအနေ WhatsApp ကိုအဆင့်အတန်းဗီဒီယို